Igrama yesiNgesi kwi-Intanethi »iYunivesithi yaseHodges - Ukwamkelwa
iindidi: Igrama yesiNgesi, Ulwimi lesingesi, IHodges Qhagamshela, Isikhokelo esikwi-Intanethi, Imfundo noQeqesho
Ukuchuma ngeKhosi ye-English Grammar Courses ukusuka kwiiHodges Connect!
Wamkelekile kwiNkqubo ye-English Grammar ye-Hodges ye-Intanethi, inkqubo elandelelanayo yokuqonda iipateni zegrama yesiNgesi ukusuka kumanqanaba asisiseko ukuya kwinqanaba eliphezulu lezakhono. Inkqubo yethu yokuhambahamba kwi-intanethi yenzelwe ngokukodwa abantu abadala abangathethi isiNgesi ukuba baqonde igrama kwaye bathethe isiNgesi ngokuzithemba. Fumana izakhono ozifunayo kwizibizo, izenzi, amagatya kunye nezihlomelo. Ezi zakhono zinokukunceda wandise amandla akho okusebenzisa isiNgesi ngokufanelekileyo nangokuzimisela kunye / okanye wandise amathuba okwenza ingeniso!
Le khosi yeyabantu abafuna ukuguquguquka ukuze bafunde kwi-Intanethi, babe nokufikelela kwi-smartphone okanye isixhobo esiphathwayo, mhlawumbi baneentloni okanye baneentloni zokunxibelelana kwigumbi lokufundela okanye kwindawo yokunxibelelana, kunye / okanye abafuna ikhosi yesiNgesi eyilelwe ukuhambisa izifundo ezikumgangatho weNgesi kwi-Intanethi ixabiso elifikelelekayo. Qala ikhosi ye-English Grammar Course namhlanje!
Le yikhosi engafunanga isidanga enikezelwa njengenxalenye ye IHodges Qhagamshela iNkqubo yezeMfundo noQeqesho, apho sikuqhagamshela khona nezakhono ezifunekayo zomqeshi ekufuneka uziphumelele.
Khangela Zonke iikhosi zegrama yesiNgesi
Iinkqubo zokuKhangela iiHodges
Ulwazi lweKhosi yeGrama yoLwimi lwesiNgesi
Qalisa ekuqaleni: Iikhosi ze-Grammar ze-Intanethi kwi-Intanethi 1, 2, & 3
Qonda indlela yokuchonga nokusebenzisa izibizo, izimelabizo, amanqaku, izichazi, izinto, zombini ixesha langoku kunye nexesha elidlulileyo lika-Be. Funda ukwenza imali, ukwenza imibuzo, kunye nekhontrakthi yokuphucula ukuqonda kunye nokuthetha ngokutyibilikayo.
Igrama yesiNgesi 1
Igrama yesiNgesi 2
Igrama yesiNgesi 3
Bhalisela isiNgesi sokuqala
Qhubeka neNqanaba eliPhakathi: Iigrama zesiNgesi kwiKhosi ye-Intanethi 4, 5, & 6
Qonda indlela yokuchonga kunye nokusebenzisa izinto ezilula neziqhubela phambili kwixesha langoku, elidlulileyo nelizayo, yenza uthelekiso kunye nezicelo, kwaye ufune kwaye unike iingcebiso kunye nemvume. Funda ngokudibanisa izivakalisi kunye nokusebenzisa izenzi zesenzi kunye neefom ezinxibeleleneyo ukuphucula ukuqonda nokuthetha ngokutyibilikayo.
Igrama yesiNgesi 4
Igrama yesiNgesi 5
Igrama yesiNgesi 6
Bhalisela isiNgesi esiPhakathi
Ukugqiba ngeNqanaba eliPhucukileyo: Iikhosi zesiNgesi zeGrama kwi-Intanethi 7, 8, & 9
Qonda indlela yokuchonga kunye nokusebenzisa onke amaxesha alula, agqibeleleyo, kunye nenkqubela phambili, izichazi kunye nezigaba zesibizo, ilizwi elisebenzayo nelokwenziwa, kunye neemeko zokucinga. Funda indlela yokubonisa isidingo, ukubakho, amathuba, kunye nethemba kunye neminqweno kuwo onke amaxesha nakwiimeko ezahlukeneyo. Ukongeza, funda ngesingqisho kunye nemvakalozwi kwintetho yesiNgesi ukuphucula ukuqonda kunye nokuthetha ngokutyibilikayo.
Phambili: $ 299
Igrama yesiNgesi 7
Igrama yesiNgesi 8
Igrama yesiNgesi 9
Bhalisela isiNgesi esiPhambili
Thatha ikhosi ekwi-Intanethi ekufundisayo ukuba usisebenzisa kanjani isiNgesi kubomi bokwenyani.
Fikelela kuzo zonke iikhosi ezili-9 usebenzisa nasiphi na isixhobo esiphathwayo.
Ikhosi nganye ine- UkuFunda ngokuNxibelelana, ukuVavanya, ukuSebenzisa iZenzo, kunye noCwangciso lokuSebenzisa.
Uvavanyo olungenamkhawulo lubuyela kwakhona.
Ikhosi efundiswe nguGqirha Leisha Cali, uMlawuli we-ESL, ngaphezulu kweminyaka engama-28 yamava endawo efundisa isiNgesi.
thenga onke amanqanaba angama-9 esiNgesi ngeGrama nge $ 795 okanye ukuthenga Ukuqala, okuPhakathi, kunye / okanye okuPhucukileyo kwe- $ 299 inye.
Musa ukulinda, Qalisa namhlanje!
Bhalisela onke amaNqanaba esiNgesi ngeGrama!
Okungakumbi malunga noGqirha Leisha Cali, uMlawuli we-ESL kunye neNkqubo yeHodges ekwi-Intanethi
UGqirha Leisha Cali, uMlawuli we-ESL, ebekwiYunivesithi yaseHodges ukusukela ngo-2004. Unamava angaphezulu kweminyaka engama-28 kwaye udibanisa uphando lwakhe kunye namava asebenzayo aphuhliswe ekufundiseni abafundi isiNgesi njengoLwimi lwesiBini kule minyaka ili-15 idlulileyo ukuhambisa izicwangciso zokufunda ulwimi loo msebenzi.
Uphuhlise ikhosi ye-English Grammar ye-Intanethi ngokukodwa kwabo bangangabinakho ukutyelela ikhampasi kumntu.
Nantsi into onokuyilindela.
Ukuzihambela ezinye iinkqubo ezifikelelekayo ngeCanvas zisebenzisa nasiphi na isixhobo esiphathwayo.
Iikhosi zeGrama ziyilelwe ukukunceda Uqonde intsingiselo yelizwi elithethiweyo nelibhalwayo.
Kukunceda yandisa izakhono zakho ngaphaya kokuphila kwesiNgesi, ezinokuthintela unxibelelwano lomntu kunye noluntu, kunye namathuba emali.
Iimvavanyo zisukela kukhetho oluninzi lokugcwalisa kwaye zinokuthathwa amaxesha ngamaxesha njengoko umfundi ethanda.
funda Isigama esihamba rhoqo endaweni yesigama esibanzi, esivumela ukuba unxibelelane ngokufanelekileyo.
Funda iindlela zokuphuhlisa nokwakha isigama kwiividiyo zokuSebenza eziSebenzayo kwisifundo ngasinye.
Fumana ngakumbi imali yakho ngokwenza ikhosi kwi-aksenti, uxinzelelo, isingqisho, kunye nengoma-indawo ezihlala zingahoywanga kwiinkqubo zesiko kunye ne-Intanethi.
Ngamafutshane, inkqubo ye-English Grammar Online ye-Hodges yenzelwe ukuba ukwazi ukuqonda ukuba isebenza njani igrama kwaye ufunde nokuthetha ngokuzithemba!
Majani Lullein, Usekela-Mongameli we-Anchorage Productions Media
“Inkqubo yandinceda ukuba nditshintshele kwilizwe elithetha isiNgesi ngokuzithemba nangokukhululekileyo. Ngaphandle kwayo, ngekhe ndikwazi ukugqibezela imfundo yam kweli. ”